Howlgalo maalintii labaad ka socda magaalada Beledweyne - Home somali news leader
Home NEWS Howlgalo maalintii labaad ka socda magaalada Beledweyne
Howlgalo maalintii labaad ka socda magaalada Beledweyne
Ciidamada Dowlada Somaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saakay xiray wadooyinka waa weyn ee ku yaalla magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan iyooga howlgalo xoogan ka wado xaafadaha qaar ee Magaalada.
Ciidamo farabadan ayaa lagu arkayaa saakay wadooyinka Muhiimka ah waxaana ay Ciidamada Joojiyeen dhamaan isku socodka gaadiidka iyo dadka shacabka ah ee waooyinkan isticmaale jireen.
Inta uu howlgalka socday ayaa ciidamada Amaanka waxaa ay qabten ku dhawaad 10 dhalinyaro ah kuwaas oo la geeyey saldhiga booliska Magaalada Baladweyne lamana oga ujeedka howlgalka xalay ilaa saakay ka socda Magaalada.
Dad careeysan ayaa xalay wadadada laamiga ah ee isku xirta Magaalada iyo Garoonka diyaaradaha Ugaas khaliif waxaa ay ku jareen dhagaxaan, waxaana ciidamada ay qaadayeen dhagaxaanta wadada lagu jaray.
Saraakiisha laamaha Amaanka Gobolka Hiiraan iyo Maamulka Hirshabeelle ilaa iyo hada kama aysan hadlin howlgalada 3 maalin ee ugu danbeeeyey ka socday Magaalada Baladweyne ee Xraunta Gobolka Hiiraan.
Duleedka magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku sugan jabhad ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle.sidoo kale waxaa lagu arkayay baraha bulshada rag hubeysan oo sheegay inay ka soo horjeedaan maamulka Hirshabelle kuwaasoo ka soo jeeda beesha Makane oo ka mid ah beelaha dega Hirshabelle.
Previous articleVoters go to the polls in the troubled Central African Republic
Next articleNiger holds historic elections despite jihadist violence